Sawiro:- Wasiiradii Puntland oo iska xaadiriyay barxadda Garoowe iyo xuska 1da August oo aan bilaaban. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaSawiro:- Wasiiradii Puntland oo iska xaadiriyay barxadda Garoowe iyo xuska 1da August oo aan bilaaban.
Sawiro:- Wasiiradii Puntland oo iska xaadiriyay barxadda Garoowe iyo xuska 1da August oo aan bilaaban.
Qaar kamida Gollaha Wasiiradda Dowladda Puntland ayaa hadda ku sugan Barxada Garoowe oo ay kasocoto qabanqaabada xuska 1Agoosto2019 oo ah maalintii la aasaasay Puntland.
Daawo Sawirada:- Xuska Xaflada 1st August ee magaalooyinka Puntland.